HomeGermanyBayer Leverkusen Oo Shaqada Ka Eriday Tababare Sami Hyypia
Kooxda Bayern Leverkusen ayaa xaqiijisay inay shaqadii ka eriday tababaraheedii Sami Hyypia, kadib guul-darrooyin la darsay kooxdaas kulamadii u dambeeyey, gaar ahaan kulankii jimcihii ee ay Hamburg ku garaacday 2-1.
Kooxda Leverkusen ayaa website-keeda ku shaacisay in maanta oo Sabti ah uu shaqada ka tegayo Hyypia, isla markaana raadinayaan beddelkiisa, si ay kooxdu uga soo kabato guul-darrooyinka is-xig-xigay ee ku habsaday.
Kooxda Bayern Leverkusen ayaa sagaalkii kulan ee u dambeeyey aan wax guul ah gaadhin, iyadoo si dhibyar looga tuuray tartanka Champions League.
“Ka dib wax badan oo aannu ka fikirnay iyo dhibaatada kooxdu ay ku jirto waxaannu go’aansanay in isbedel degdeg ah loo baahan yahay si wax walba dhanka kale loogu rogo.” ayuu madaxa Leverkusen Michael Schade ku sheegay warbixin ay kooxda soo saartay.